Hanka Abeey Ee Qabsashada Xamar Iyo U Heellanaanta Farmaajo. (Maqaal) Qore Eng: Cali Xaaji. – Shabakadda Amiirnuur
June 25, 2018 6:19 am by admin Views: 363
Ra’iisulwasaaraha Itoobiya Abeey, ma ahan nin ku cusub nidaamka dalkiisa, mana ahan nib dibadda laga keenay oo ay dowlado shisheeye soo korsadeen, balse waxaa soo barbaarsaday qowmiyadda Tigreega oo ay ka dhalatay hooyadii oo Kiristan ah.
Dhanka diinta marka la qeexo Abeey, waa “Baqal” ama waa sida Obama oo kale, oo waxaa iska dhalay dad aan isku diin ahayn, Aaabihii wuxuu ahaa Muslim, Hooyadiina Kiristan, sidaa darteed ayuuna qaatay diinta Nasaarada.
Qofkii u baahan qisada Hiillaana oo faahfaahsan iyo kuwa laba, wuxuu ka heli karaa barnaamijka “Dhulkii awooweyaasheen yaa soo dhicin doona” oo aan bishii Ramadaan kala socda idaacadda islaamiga ah ee Al-furqaan ama kutubka taariikhda ee ka hadlaya loollanka Muslimiinta iyo Nasaarada geeska Afrika.
Qore: Eng: Cali Xaaji.